'लोकदोहोरी बिगार्यो भन्ने आरोप लाग्यो'- रामजी खाँड
नेपाली लोक तथा दोहोरी गीतको क्षेत्रमा लगभग दुई दशक देखी निरन्तर लागिरहेका गायक रामजी खाँड पछिल्लो समयका निकै ब्यस्त गायकको रुपमा चिनिन्छन् । बि.स. २०५६ सालबाट सांगितीक यात्रा शुरु गरेका रामजीले ‘वालिङ बजार’ बोलको गीतबाट आफ्नो गायन यात्रा अगाडि बढाएका थिए । पहिलो गीतमा शर्मिला गुरुङ र शिला आलेसँग स्वर दिएका रामजीले अहिलेसँम्म दर्जनौं गायिकासँग गीत गाइसकेका छन् । उनले अहिलेसम्म ७ हजार गीत गाइसकेका छन् भने सयभन्दा बढी गीतमा एरेन्ज र दर्जनौं गीतमा लय तथा शब्द पनि भरेका छन् ।
बिद्यालयमा अध्ययन गर्दा देखीनै गायनक्षेत्रमा निकै रुचि राख्ने रामजीले जन्मजिल्ला स्याङजा मा हुने धेरै कार्यक्रमहरुमा भाग लिएर बिजेता पनि बन्ने गर्दथे । साथै उनले जिल्लास्तरिय कार्यक्रमबाट धेरै पटक पुरस्कृत भएको पनि सम्झना गराए । यसैबिच उनै रामजीसँग हिमालय टाइम्सले उनका गीत संगीतको संघर्षको बेला र सफलताको बारेमा प्रश्नोत्तर गरेको छ ।
तपाईलाई दर्शकमाझ रामजी भनेर चिनाउने गीतको नाम लिनु पर्दा कुन गीतलाई लिनु हुन्छ ?
मैले गीत गाउँन शुरु गरेको करिब १० बर्ष भइसकेको थियो तर मेरो कुनैपनि गीत त्यस्तो सबै दर्शकले सुन्नेमा परेनन् अर्थात चर्चित हुन सकेनन् । आज भन्दा करिब आठबर्ष अघिको कुरा हो । मलाई चिनाउने गीतको नाम लिनुपर्दा ‘देउरालीको भट्टी पसल’ जसमा देवी घर्तिसँग मैले गाएको थिए र शिबहमालको शब्द रहेको थियो । यो गीतलाई म कहिल्यै भुल्न सक्दिन त्यस्तै ‘पछ्यौरी लेऊ बैना’ ले पनि मलाई ठुलो सफलता दियो । यी दुई गीत जब बजारमा आए दर्शकले यतिधेरै मन पराइदिनुभयो कि सायद यी गीत नसुन्ने कुनै दर्शक हुनुहुन्न होला ।
आजभन्दा करिब एकदशकको अघिको कुरा गर्नुभयो । त्यो बेला त सिडी, डिभिडि पनि बिक्थे होला नि ?
हजुर अहिलेजस्तो इन्टरनेटको पहुँच निकै कम थियो र सबैको हात हातमा यसरी मोबाइल र इन्टरनेट थिएन त्यसले गर्दा पनि गीतको सिडी, डिभिडि धेरै बिक्रि हुन्थ्यो । त्यो बेलामा मलाई ति गीतले निकै ठुलो सहयोग पु¥यायो । ति गीत चर्चित हुनुपुर्व मैले गीतसंगीतको क्षेत्रमा धेरै लगानी गरीसकेको थिएँ । नाफा भन्ने केहि थिएन । तर ति गीतले मलाई निकै खुसी बनायो र ठुलो हौसला पनि दियो ।
सफलता पछि अगाडिका दुखको बेला जो तपाईलाई साथ दिएका थिएनन् उनीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुहुन्थ्यो ?
मैले ति दुई गीत भन्दा अघि गीत नगाएको होइन । दर्जनौं गीत गाइसकेको थिएँ तर कुनै पनि गीत त्यसरी चर्चित नहुदा सबैतिरबाट पछिपरेजस्तो हुँदो रहेछ । मलाई शुरुवातका दिनहरुमा गीत रेकर्ड गर्न समेत अप्ठ्यारो परेको थियो । रेकडिर्ङ स्टुडियोले रेकर्ड गर्नै मान्थिेनन् । चर्चित गायकको मात्र सिडी बिक्छ भनेर हामीलाई कुनै स्थान नै हुन्थेन । हारगुहार गर्दा पनि निकै मुस्किल पथ्र्यौ । कतिपटक त मैले आफुले गाउने भनेको गीत पनि त्यो बेलाका चर्चित अग्रह दाजु राजु परियारलाई गाउन दिएका थिए । यदि राजु परियारले गाउदैनन् भने गीत रेकर्ड हुँदैन समेत भनिन्थ्यो । त्यसैले आफ्नो गीत अरुलाई दिन बाध्य हुनुपथ्र्यो ।
अहिले ति ब्यक्ति जो मलाई दुख पर्दा दुख मै छोडेका थिए उनीहरुबाट राम्रो गर्नुभएको छ भन्ने प्रतिक्रिया मात्र आउछ । र उनीहरु नै अहिले हाम्रोमा रेकर्ड गर्नुस् भन्ने पनि आउछन् । मेहनतको फल मिठो हुन्छ भन्ने बुझेरै मैले निरन्तर मेहनत गरेको थिएँ त्यसैले पनि अहिले त्यो फल मिलेको हो जस्तो लाग्छ ।
एकसमय गायनक्षेत्रबाट हैरान भएर बिदेश जान पनि लाग्नुभएको थियो रे नि ?
हो... । मैले करिब सात÷आठ बर्षसम्म निरन्तर गीतसंगीतको क्षेत्रमा काम गरिरहदा पनि कुनै सफलता पाउन नसकेपछि हार खानुपरेको थियो । बिशेषतः मलाई घरबाट प्रेसर पनि आयो । किनकी म सँगै पढेका कोहि साथीहरु लाउरे भएर, कोहि साथीभाईहरुले गाउँमा बिदेश गएर पैसा कमाएर घर बनाइसकेका थिए तर मेरो भने केहि प्रगती थिएन त्यसकारण पनि घरबाट बढी प्रेसर आउथ्यो र अन्तमा बिदेश जाने निर्णय गरेको थिएँ । मैले दुबईका लागी भिषाको काम पनि अगाडि बढाएको थिएँ । त्यहि बेलामा ‘देउरालीको भट्टी पसल’ र ‘पछ्यौरी लेऊ बैना’ गीत यतिधेरै चर्चित भयो कि मलाई सबैतिरबाट वाह वाह मात्र आउथ्यो त्यसपछि मैले नै आईसकेको दुबईको भिषा पनि रोकेर गीतसंगीतमै रमाउन थालेको हुँ । त्यसपछि मलाई निरन्तर गीतको काम आउन थाल्यो ।
अहिलेसम्मको कुरा गर्दा सांगितीक यात्राकै लागी बिदेश भ्रमण कति देशमा गर्नुभयो र पहिलो बिदेश भ्रमण कुन थियो ?
सांगितीक कार्यक्रमकै लागी भनेर अहिलेसम्म करिब ३० देशको भ्रमण गरिसकेको छु । जहाँसम्म लाग्छ नेपालीहरु हुनुभयो सबैदेशमा गइसकेको छु । त्यस्तै पहिलो बिदेश भ्रमणको कुरा गर्दा हङकङबाट बिदेशको यात्रा शुरु भएको हो ।
अहिलेसम्म मासिक आम्दानी बढीमा कति गर्नुभएको छ ?
हामी कलाकारहरुको आम्दानी यति नै हुन्छ भन्ने त हुँदैन, सिजन अनुसार आम्दानी पनि फरक–फरक हुन्छ । मैले आफु बजारमा केहि चर्चित हुनथालेपछि एक गीत रेकर्ड गरेको ५ हजार लिने गर्थेँ र कहिले काँही दिनमै ९ वटा गीतसम्म पनि रेकर्ड भएको छ । त्यस्तै सिजनमा सबैभन्दा धेरै आम्दानी भएको बिदेश भ्रमणबाट अलि धेरै हुनेहो । एकपटक युके को एकमहिने सांगितीक यात्रामा १२ लाख सम्म आम्दानी भएको थियो । तर नेपालमै पनि सिजनको बेला १४ देखी १५ लाखसम्म आम्दानी हुन्छ ।
गायनमा यति धेरै नाम कमाउदा पनि मोडलिङमा पनि लाग्नु भएको छ नि, पैसाकै लागी कि सौख ?
मैले गाएका थुप्रै गीतमा अन्य मोडलहरुको अभिनय छ तर पछिल्लो समय मैलो गाएका केहि गीतहरुमा आफैले मोडलिङ गरेको छ । मैले पैसाको लागी यसरी मोडलिङ भने गरेको होइन र सौख भनेर त्यस्तो भिडियो गर्नै पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन तर एक दुईवटा भिडियोमा देखिदा दर्शकले मन पराइदिनुभयो र धेरै साथीहरुले राम्रो हुन्छ आफै भिडियो गर्नुस् भनेपछि गर्न थालेको हुँ । अहिले त अन्य साथीहरुले गाएको गीतमा पनि मलाई भिडियोका लागी अफर गर्नुहुन्छ । करिब ५० वटा अन्य गायकले गाउनु भएको गीतमा मोडलिङ पनि गरेको छु । दर्शकले मन पराउनु भएको कारण मात्र मैले भिडियो गरेको हुँ कुनै अन्य कारण छैन ।
तपाईले गाएका गीतहरु तपाईको ‘नेचुरल भ्वाइस’ भन्दा पनि अर्कै बनाएर फाइनल गरिन्छ भन्ने सुनिन्छ नि यो कुरा के हो ?
लोकदोहोरीको क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय धेरै परिवर्तन आइरहेको छ । हुन त लोकदोहोरीको आफ्नौ मौलिकपन छ तर प्रबिधिसँगै केहि परिवर्तन पनि हुँदै गएको छ । यसैक्रममा मैले गाउनेसमयमा पनि प्रविधिको परिवर्तन सँगे स्वरलाई थोरै परिवर्तन गर्दा मिठास आउने प्रविधि आयो । यस्तो प्रविधि सबैको स्वरमा ‘म्याच’ हुँदैन, मेरो मा भयो त्यसैले त्यसलाई शुरुवातका केहि गीतहरुमा ‘फ्लो’ गरेको हुँ । सबैगीतमा त्यस्तो भने छैन ।
तपाईले गाउने लोकगीतहरु मौलिक लोकगीत भन्दा बाहिरका हुन्छन् नि, लोक दोहोरी बिगार्यो भन्ने आरोप पनि छ नि ?
मैले नै लोकदोहोरीको क्षेत्रमा केहि परिवर्तन ल्याएको हुँ । परिवर्तन भनेर नेपाली मौलिकता लाई बिर्सेको छैन तर एक्कासी केहि परिवर्तन ल्याउदा सबैलाई अनौठो लाग्छ । त्यसैले पनि मलाई लोकदोहोरी बिगार्यो भन्ने आरोप पनि लागेको थियो । कुनैबेला तालि भन्दा गालि बढी पनि आएको थियो तर मैले गाउने गीतमा लोकपन भने छुटेको हुँदैन ।
अन्तमा, लोकदोहोरीमा पनि सेन्सर हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ नि, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
यो कुरा एकदम आवश्यक छ । चलचित्र क्षेत्रमा सेन्सर बोर्ड भएजस्तै लोकदोहोरीको क्षेत्रमा पनि सेन्सर बोर्ड हुनुआवश्यक छ । पछिल्लो समय परिवारसँग बसेर हेर्नै नमिल्ने गीतहरु बजारमा आएका छन्, तर हामी केहि गर्न सक्दैनौं । लोकदोहोरी प्रतिष्ठान त छ तर यस्तो नगर मात्र भन्न सक्छौं सिधै कारबाही गर्ने अधिकारी हुँदैन त्यसैले सरकारी मातहतबाट सेन्सर बोर्डको स्थापना भए लोक दोहोरी क्षेत्र बिग्रन पाउने थिएन । सेन्सर बोर्डको जिम्मा सरकारले प्रतिष्ठानलाई जिम्मा मात्र दिएपनि पुग्छ ।
यो समाचार हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।
‘कालि बुढी भन्दा खुसी लाग्छ’ : सारदा गिरी
अनमोललाई पाउने भाग्यमानीः सुहाना थापा
त्रिमुर्तिले बनाएको सालको पात
मोटी नै मेरो पहिचानः मेलिना ठकुरी
राजेश हमालको डुब्लिकेट भन्दा चित्त दुख्छः शीतल केसी
करिअर बनाउने बेला त्यस्तो कुराको पछि लाग्दिनः नायिका प्रतिक्षा